Huawei Y6II bụ smartphone tụụrụ ime maka ụmụaka na-eto eto | Gam akporosis
Site na Huawei anyị chọpụtara n’izu gara aga na-abịa kesaa na nkeji iri na ise nke afọ ihe karịrị nde ekwentị iri ise gburugburu ụwa. Nke a na - etinye ya n'ọnọdụ dị ezigbo mkpa iji nọgide na - ebili na ọdụ ụgbọ mmiri nke ụlọ ọrụ nke atọ kachasị ukwuu nke smartphones na ụwa. Ọ bụrụ na ihe niile na-aga dịka ọ dị na mbụ, ịkwesighi ichegbu onwe gị, ebe ọ bụ na ewezuga njedebe dị elu ọ nwekwara ezigbo akwụkwọ nke smartphones nke ọnụahịa niile.
Ugbu a tinye ọzọ na agwaogwa nke mobile ngwaọrụ na Huawei Y6II, onye na-esote ya ulo oru a afọ gara aga na nke anyi zutere na Y6. Ọnụ nke na-abịa ugbu a na imepụta ọhụụ yana nke na-emeziwanye ihe a hụrụ na mbipụta izizi. A Y6II nke a na-elekwasị anya na ndị na-ege ntị kpọmkwem na agba ndị ahụ na imepụta ihe na-adịghị mma nke ndị ntorobịa na-ekere oke dị ka ị pụrụ ịhụ na onyonyo enyere na ekwentị ntinye a.
1 A ọhụrụ na-eto eto imewe
2 Huawei Y6II nkọwa
A ọhụrụ na-eto eto imewe
A maara onye na-emepụta China nke ọma maka lezie anya ị na-eji imewe ahụ nke ngwaọrụ ma enwere ọtụtụ ndị nyegoro anyị ohere ka anyị mata otu esi etinye nkọwa pụrụ iche na ọrụ niile ọ na-ahụ anya. Na Huawei Y6II anyị nwere ike ịchọta mkpuchi azụ ahụ nke na-eji ederede diamond nwere ike ịnye mmetụta ndị ọzọ. Agba ndị ahụ bụ isi ihe ọzọ dị na ihu ọma ya iji mepụta mkpokọta dị egwu nke na-agaghị ahapụ onye ọ bụla na-enweghị isi mgbe ọ na-ere ya na ụlọ ahịa ahụ. Ọ bụghị naanị na ihu ihu ndị ahụ nwere ike ịdọrọ uche.
Anyị na-eche ihu ọnụ na-adịghị obere ma ọlị, mana ụzọ ọzọ gburugburu, ebe ọ nwere 5,5 anụ ọhịa ahụ ịbanye na mpaghara ahụ anyị na-amata dị ka phablets. Site na ihe anyị na - enweghị ike ikwu na ọ bawanye ogo bụ mkpebi ebe ọ bụ naanị na HD. Ya mere gaa na-atụ anya njupụta pixel nke 267pp.
Ewezuga ihe a haziri, Huawei Y6II nwere ụfọdụ ndozi na ọjị dịka HiSilicon Kirin 620 isi ihe nhazi asatọ rute elekere elekere nke 1.2 GHz. 2GB na 16GB Ram nchekwa dị n'ime nke nwere ike ịgbasa site na kaadị micro SD. Batrị ahụ ruru 3.000 mAh nke mere na 5,5 ″ ihuenyo anaghị eme ihe ya na oriri batrị ma anyị nwere ike ibili ngwa ngwa. Banyere igwefoto, ugbu a azụ na-eto na 13 megapixels na ihu na-abawanye ruo 8 MP. Uzo a bu f / 2.0.
Huawei Y6II nkọwa
5,5-anụ ọhịa HD ihuenyo (720 x 1280) 267 ppi
Kirin 620 octa isi 64-bit chip clocked na 1,2 GHz
16 GB nke ebe nchekwa dị n'ime ya na nhọrọ iji gbasaa ya na micro SD ruo 128GB
13 MP n'azụ igwefoto
WiFi, 4G LTE, GPS, GLONASS, Bluetooth
A gam akporo 6.0 Marshmallow Mmetụta UI 4.1
Akụkụ: 154,3 x 77 x 8,45 mm
Agba: nwa, ọcha, ọla edo, pink, acha anụnụ anụnụ na odo
N'ezie, anyị nwere ike ịchọta ekwentị mbubata melite ụfọdụ akụkụ nke Huawei Y6II a, nke na - eme na anyị na - eche ihu na ụlọ ọrụ nke guzosiri ike na mba anyị, ya mere nkwado maka ngwaọrụ mkpanaka nwere ike ịdị mkpa mgbe ị na - anwa ịchekwa euro ole na ole site na ịhọrọ ekwentị ọzọ. N'ọnọdụ ọ bụla, Y6II bụ ekwentị echepụtara maka ụdị ndị na-ege ntị ebe imewe ahụ na-enye ụfọdụ akara ngosi.
Anyị maara na ọ ga-abịa na ọnụahịa nke 169,90 euro, ma anyị amaghị kpọmkwem ụbọchị mmalite nke ọ bụla onye ọrụ ga-enwe ike ịhọrọ ịzụta ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Huawei » Huawei Y6II bụ ama ọhụụ ọhụụ batara nwere ọdịdị nwatakịrị